Hupenyu Strange 2 ichauya kuLinux uye macOS uyu China | Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | vatyairi, Linux Mitambo
Pamwe, vashandisi vazhinji, kunyanya vatambi, vangazive iyo Feral Inopindirana kambani kwenguva yakareba. Izvo zvakare zvinogona kunge kuti vamwe vazhinji vanozviziva zvakanyanya kune iyo nhau senge iyo yatinokuunzira nhasi: vari kuzotakura mutambo kuitira kuti iwanikwe yeLinux uye macOS, chimwe chinhu chavakatoita kanoverengeka gore rino nemitambo senge tsvina 4 o Mumvuri weTomb Raider. Pane ino nguva, mutambo wakasarudzwa uchave Hupenyu Hwakasimba 2.
Saka Yakazivisa maawa mashoma apfuura pawebhusaiti yepamutemo. Semazuva ese, izvo zvavakaburitsa inongova ndima inotsanangudza nezve izvo mutambo uyu uri, zuva racho kuuya macOS uye Linux uye vhidhiyo inosimudzira yemusoro, iyo yauinayo pazasi pemitsara iyi. Kuti uzive zvimwe zvakawanda, isu tichafanirwa kumirira kuvhurwa kuve pamutemo.
Hupenyu Strange 2 iri kuuya kuLinux muna Zvita 19
Nyika yapandukira hama Sean naDaniel uye ikozvino havana imwe sarudzo kunze kwekutiza, vanochengeta chakavanzika chine simba. Mapurisa ari kutevera nzira yavo uye hazvizove nyore kwavari kuti vasvike kwavanoguma, Mexico. Mugwagwa wakareba uye uzere nematambudziko, unogona here kuvimba navo vanhu vanoyambuka nzira yako?
Hupenyu Hwakashamisa 2 chiitiko chemifananidzo chakaburitswa munaGunyana 2018 yeWindows, PlayStation 4, uye Xbox imwe. Iyo China, Mbudzi 19Rinopfuura gore gare gare, ichasvikawo paApple macOS anoshanda masisitimu uye iyo Linux iyo vazhinji vevaverengi vedu yavanoshandisa. Feral Inopindirana yaive zvakare kambani inotarisira kuendesa chikamu chekutanga chemutambo kune aya mapuratifomu.
Kusvikira iko kuvhurwa kuri pamutemo, hatigone kuve nechokwadi chekuti zvidiki zvakatemwa zvichave zvekutamba Hupenyu Chinoshamisa 2, asi paWindows ivo vanotevera:
CPU: Intel Core i3-2100 (3.1GHz) kana AMD Phenom X4 945 (3.0GHz).
Inoshanda system: Windows 7 (64-bit) kana yakakwira.
Graphics kadhi: Nvidia GeForce GTX 650 2GB kana AMD Radeon HD 7770 2GB.
Nzvimbo: 14 GB
Yakatsaurwa vhidhiyo RAM: 2GB.
Kana zviri izvo zvinokurudzirwa, processor yacho ichave i5, 6GB ye RAM, Windows 10 uye 4GB yevhidhiyo.
Kana kuvhurwa kuri pamutemo, isu tichakwanisa kutamba iri zita kubva paStam vhidhiyo yemitambo chikuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Hupenyu Strange 2 iri kuuya kuLinux uye macOS uyu China nekuda kweFeral Interactive
Edza enhoroondo anoshanda masystem kubva kubhurawuza rako